Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Hiofana any Etazonia sy Alzeria ireo zandarimariam-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaFiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Hiofana any Etazonia sy Alzeria ireo zandarimariam-pirenena
15/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandray diplaomaty ambony roa miasa eto Madagasikara ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard, sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena miadidy ny zandarimaria ny alakamisy teo dia Andriamatoa David Ranauldi, Régional Sécurity Officer miasa ao amin’ny masoivohon’i Etazonia, misahana an’i Madagasikara sy ny Nosy Comores, sy Andriamatoa Bafdal Mokddem, masoivohon’i Alzeria teny amin’ny birao fiasany eny Betongolo. Nivoitra nandritra ny fihaonana tamin’ny masoivohon’ny Etazonia ny fahalavoan’ny zandary mahatratra 17 nandritra ny fifandonana tamin’ireo dahalo noho ny fananan’ireto farany ny fitaovana mahery vaika sy ny maha-mazo an’isa azy ireo. Na eo aza ny vokatra mivaingana efa azo noho ny ezaka maharitra atao, dia ilaina ny fiaraha-miasa hoy ny sekreteram-panjakana . Miompana amin’ny fanampiana ara-pitaovana hentina hiadiana amin’ny asan-dahalo, izay hiaraha-mahalala fa mampahory ny vahoaka izany no hiompanan’ny fiaraha-miasa, tafiditra amin’izany ny angidimby sy ny solomaso ahafahana mahita amin’ny alina. Notsindriany ihany koa fa tsy mamono olona fahatany ny zandarimaria fa rehefa amin’ny trangana fiarovan-tena ao anatin’ny fahaporetana, izay voafaritry ny lalàna mazava tsara, vao mampiasa fitaovam-piadiana izy ireo. Ho an’ity diplaomaty ity, dia nilaza izy fa hojereny ny fahafaha-manao amin’ny fampitaovana fa ny mikasika ny fampiofanana no hamafisina aloha. Koa ankoatra ny fandefasana zandary hiofana any ivelany dia vinavinainy koa ny fandefasana manam-pahaizana manokana eto an-toerana, hanome fanofanana ireo zandary Malagasy mba hampitomboana ny traikefa sy ny fahaiza-manaony. Ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta izay hatrany, dia nanasa ny masoivohon’ny Amerika ity mba hitsidika ny vondron-tokana manokana miady amin’ny dahalo any Betroka ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria mba ahafahany mijery sy mahafantatra ny tena zava-misy marina any an-toerana.
Hamafisina ny fiaraha-miasa
Nisongadina nandritra ny fihaonana tamin’ny masoivohon’i Alzeria kosa indray ny fisian’ny filaminana ihany no mampandroso ny tanàna iray. Ny fisian’ny asan-dahalo izay dia azo sokajiana ho endrika fampihorohoroana, ary isan’ny fototra mamparefo ny fampandrosoana. Ankoatra izay, nankasitraka ny paikady napetraka ny zandarimaria tamin’ny nisian’ny dahalo niova fo izay miisa 400 lahy farany teo, izay tsy nisy fifandonana na faneriterena. Nilaza kosa ny sekreteram-panjakana fa tokony hisy ny fifanakalozan’ny roa tonta traik’efa mba hampanjariana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara, satria isan’ireo firenena azo lazaina efa manana traik’efa sy fahaiza-manao avo ny zandarimaria Alzeriana, voamarika izany nandritra ny ady nataon’izy ireo tamin’ny mpampihorohoro, ary isan’ny firenena manana antokon-tafika misongadina eto Afrika koa i Alzeria, hoy hatrany ity sekreteram-panjakana ity. Nilaza moa ny masoivohon’ny Algerie fa vonona tanteraka hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin’izay manandrify ny zandarimaria malagasy. Noho izany, dia hojereny akaiky ny fanatanterahana ny fanofanana, izay mety hiseho amin’ny fandefasana zandary hiofana any Alzerie sy fandefasana manam-pahaizana manokana hanofana ny zandary eto an-toerana. Marihina fa efa hatry ny ela ny fisian’ny fiaraha-miasa teo amin’i Madagasikara sy Alzerie, ary misy mihitsy aza ny tantara mifaningotra eo amin’ny firenena roa tonta fa noho ny toe-javatra maro dia somary nareforefo izany.
Efa tsy voafehy intsony. Voaporofo ankehitriny fa tsy mahavita ny asany ary tsy mahafehy ny andraikiny intsony ny ben’ny tanànan’i Mahajanga, Mokthar Salim Andriatomanga. Raha efa nikononkonona ny hampiatona an’ity ben’ny tanàna avy amin’ny antoko ...Tohiny